FAQ-so – Manilla Klinik
Su'aalaha ugu badan iyo qoraalka ku saabsan gudniinka ragga
Waxaad u baahan tahay gudniin sababo la xiriira dhaqan, diin, nadaafadeed ama waxyaabo la isku qurxiyo awgood. Dhawaan, dukumiintiyada caafimaadku waxay muujiyeen in gudniinku leeyahay ujeedo kahortag STDs iyo HIV.
Waa maxay hannaanka qalliinka gudniinku?
Qalliinka waxaa lagu sameeyaa suuxin gudaha ah iyo haddii cunugu uu aad u walaacsan yahay, mararka qaarkood waxaa lasiiyaa daweynta kahor qalliinka. Waxaa la hubiyaa in suuxinta ay saameyn ku yeelato ka dib, isku dhejis ah ayaa lagu dabaqayaa burooyinka isla markaana burooyinka waxaa lagu gooyaa maqaarka madaxa. Markaa ka dib, ama waxoogaa dhejin ama waad ka tagi kartaa iyada oo aan lagu xidhin (carruurta ka yar 1 sano). Xargaha ayaa iska taga iyaga laftooda. Xaaladaha qaarkood, tolida waa in laga saaraa haddii aysan si kedis ah ugu dhicin. Nabarka boogta ah wuxuu bogsadaa qiyaastii 5-10 maalmood.
Ma jiraan dhibaatooyin la xiriira guditaanka?
Dhibaatooyinku waa dhif laakiin waa dhici karaan tusaale ahaan. Dhiigbaxa, infekshinka, adkaanshaha nabarrada. Waxaan aad uga walaacsanahay natiijooyinkayaga waxaana bukaanka la siiyaa booqasho ku soo laabasho bilaash ah si loo kontaroolo waxaanan ugu yeeraynaa bukaanka badidooda maalinta ku xigta. Qalliinka ka dib, waalidiinta waxay helaan lambar taleefan oo ay wici karaan 12ka saacadood ee ugu horreysa qalliinka ka dib haddii wax dhacaan.
Sidee loo maareeyaa boogta qalliinka ka dib?
Waalidku waxay helayaan warbixin afka ah iyo qoraal ah oo ku saabsan daryeelka dhaawaca. Waxaa lagu talinayaa in dib loogula laabto xafaayadda carruurta xafaayadda leh ee leh xuub cad oo ku duuban boogta 2 toddobaad qalliinka ka dib. Xafaayadda waa in loo beddelaa sidii caadiga ahayd. Ilmuhu wuxuu qubeysan karaa sida caadiga ah 2-3 maalmood qalliinka ka dib.
Waalidiintu waa inay isu diyaariyaan fasaxa jirada.
Waxaad ku bixin kartaa SWISH, kaash ama kaadh.